FAMPIELEZAN-KEVITRA - MAHAJANGA : Notazomina ireo fiara voarenty ny sarin’ireo kandida
Baiko nidina nandritra ny fandalovan’ny solontenan’ny Céni tao amin’ny lapan’ny tanànan’i Mahajanga izany ny alakamisy 31 oktobra lasa teo raha nidinika tamin’ireo liam-baovaon’ny fifidianana izy ireo. 6 novembre 2019
Fehin-kevitra araka ny lalàna navoakan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana farany teo izany, ka izay rehetra mpilatsaka hofidina ka mampiely izany amin’ireo karazana dokam-barotra dia sokajiana ho fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana. Ny « pré-campagne », dia fampahafantarana ny filatsahan-kofidian’ny olona iray na ben’ny tanàna na mpanolo-tsaina, eo koa ny manolotra ny fandaharan’asany sy vinam-piarahamonina kasainy hatao rehefa tonga eo amin’ny toerany izy, ary manangana ny kaomitim-panohana.
Saingy tsy azo atao ny mametaka takelaka miendrika dokam-barotra etsy sy ero nefa nataon’ireo kandida sasany teto Mahajanga andro maromaro lasa izay, fa indrindra ny mametaka ny sarin’izy ireo amin’ireo fiarakodia. Dia tsy maintsy nampidirina am-bala nanomboka teo ireo fiara izay tratra nirenty izany, satria voararan’ny lalàna avy amin’ny Hcc.
Sehatra nifanankalozana ho an’ireo kandida sy mpiandany aminy, ny mpanolo-tsaina, ny sarambabem-bahoaka, ny prefektioran’i Mahajanga ary ny Céni no nifampitaona tao amin’ny lapan’ny tanàna tamin’io fotoana io. Tsikaritra tamin’ireo fanontaniana nilam-baliny maro nipololotra natetika tao, dia ny ahiahy no betsaka. Mba hisian’ny mangarahara ho an’ireto mpilatsaka, dia nohamafisin’ny Céni foibe tao fa "Tsy misy kandidam-panjakana" araka ny ahiahy ny samy mpilatsaka fa mitovy daholo ny rehetra.
Fantatra kosa fa ny 05 novambra amin’ny enina ora maraina hoavy izao no hisokatra amin’ny fomba ofisialy ny fampielezan-kevitra ny fifidianana ben’ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina eto amin’ny tanin’ny repoblikan’i Madagasikara ary mifarana ny 25 novambra, raha ny fahanginam-pifidianana na "silance électorale" no fiantso ny daty ny 26 novambra hialohavana ny fotoam-pifidianana efatra amby roaplo ora aorihan’izay.